स्वस्थ छुट्टी तनाव व्यवस्थापन (धुम्रपान वा पिई बिना) - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा समाचार औषधि जानकारी, समाचार खेलहरु औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण समाचार, कल्याण कल्याण कम्पनी, समाचार कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> धूम्रपान वा पिई बिना छुट्टि तनाव व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ
छुट्टीको मौसम उत्सवहरू भरिन्छ pre उपहार, भोज, र साझा भोजनको साथ। त्यस्ता परम्पराहरूले ओभरइन्डल्ज गर्ने प्रलोभन आउँछ — पैसा खर्च गर्ने, ककटेल पिउने वा धनी खाना खाएर। कसैको लागि सही सन्तुलन पाउन गाह्रो हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंले यस वर्ष निकोटिन वा मद्यपान नगर्ने निर्णय गर्नुभयो।
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् सिगरेट वा वयस्क पेय पदार्थहरूलाई होईन। त्यहाँ भएको बावजुद सिगरेट धूम्रपानमा% 67% ड्रप अमेरिकी वयस्कहरुमा १ U since65 देखि, धूम्रपान गर्नेहरूलाई यो छोड्न गाह्रो लाग्छ। यसैबीच, द्वि घातुमान पिउने अत्यधिक प्रचलित छ - ए वयस्कहरूको चौथाई बितेको महिनाको एकै बैठकमा धेरै ड्रिंकहरू भएको रिपोर्ट गरिएको। र यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्दछ।
तपाईंले हालसालै धूम्रपान गर्ने बानीमा लात हालेको छ, वा तपाईंको स्वास्थ्यको लागि कडा शब्दहरू प्रयोग गरिरहनुभएको छ, सामाजिक परिस्थितिको दबाबले तपाईंको संकल्पमा धुम्रपानमा रहन गाह्रो बनाउन सक्छ-वा रक्सीमुक्त रहन। (यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ अधिक गम्भीर व्यसनको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको डाक्टर वा बाट पेशेवर मद्दत लिनु महत्त्वपूर्ण छ SAMHSA को लागि राष्ट्रिय हेल्पलाइन, पदार्थ दुरुपयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रशासन ।)
को रूप मा छुट्टीको मौसम अनिश्चितताको दृष्टिकोणले भरिएको, तपाईंलाई लाग्न सक्छ, के धुम्रपान वा मद्यपान बिना छुट्टी तनाव व्यवस्थापनसँग सम्भवतः सम्भव छ? विज्ञहरू भन्छन् यो छ।
तनाव र धुम्रपानको लागि ट्रिगरहरू जान्नुहोस्
वर्ष को एक समयमा जब एक उत्सव चीयर्स (वा एक मित्र संग साझा सिगरेट) सामान्य छ, यो पदार्थ मुक्त हुन मुश्किल हुन सक्छ। यो अझ सत्य हो यदि तपाईसँग परिवारसँग चुनौतीपूर्ण सम्बन्ध छ कि तपाईले यस बर्षको विशेष समयमा मात्र देख्नु हुन्छ। परिस्थितिगत पारिवारिक घटनाहरू, आर्थिक समस्या, वा विषाक्त वातावरणले सामान्यतया पुरानो बानीमा फर्किन्छ, एरिजोनाको स्कट्स्डेल लाइफस्टाइल मेडिसिनका चिकित्सक, अलेक्ज्याण्डर लाइटस्टोन बोरसान्ड, एमडी भन्छन्।
अर्को शब्दमा, यदि अंकल ब्रायनले जहिले पनि क्रिसमसमा तपाईंको स्नायुहरूको परीक्षण गर्‍यो र सिगरेटको लागि बाहिर गएकोले तपाईंलाई गत बर्ष शीतल बनाउन मद्दत पुर्‍यायो भने, यो फेरि उही समान प्रतिबन्ध प्रविधि प्रयोग गर्न लोभ्याउने छ। वा, यदि एक गिलास वाइनले तपाइँको छुट्टी क्रेडिट कार्ड बिलहरूको सामना गर्न अलि सजिलो बनाउँदछ भने, तपाईको खातामा सन्तुलन राख्न तल बस्नु अघि बोतल खोल्न प्रतिरोध गर्न गाह्रो छ।
न्यु योर्कको द रोजेनथल सेन्टर फर एडिक्शन स्टडीका अध्यक्ष एमडी मिशेल एस रोसेन्थालका अनुसार रक्सी र सिगरेटको धेरै प्रमुख कारणहरू हामीमध्ये धेरैले अनुभव गर्छौं। ट्रिगर एकाकीपन, चिन्ता र उदासीनता हुन्, उनी भन्छन्। व्यक्ति आफैंलाई सान्त्वना दिन र मद्दत र मद्दतको लागि स्व-औषधी प्रयास गर्छन्।
सम्बन्धित: भापिंग तथ्या .्क
याद गर्नुहोस्, राहत केवल अस्थायी हो
रक्सी र सुर्तिजन्यले तनाव कम गर्न सक्दछ जब तपाईं तिनीहरूलाई उपभोग गर्नुहुन्छ। छोटो समयको लागि, निकोटीनले मांसपेशिहरु आराम गर्ने, मुड सुधार गर्न, र एकाग्रता बढाउन भनिन्छ। मदिरा एक केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उदासिन छ जुन अस्थायी रूपमा तपाईं शान्त र शान्त महसुस गर्नुहुन्छ। उनीहरूले यो क्षणको लागि काम गर्छन्, तर त्यसपछि मानिसहरू मदिराको दुर्व्यसन हुन्छन् र फेरि सुर्तिजन्य पदार्थको लत लाग्छ र तपाईसँग आउने सबै खतराहरू हुन्छन्, डा रोसेन्थल बताउँदछन्।
धेरै पिउँदा वा धुम्रपानले वास्तविक जोखिम ल्याउँछ — तपाईंको सम्बन्धमा, तपाईंको वालेटमा, र तपाईंको जीवनमा पनि यदि तपाईं जोखिमपूर्ण व्यवहारमा संलग्न हुनुहुन्छ जब असक्षम हुनुहुन्छ। जब तपाईं नीलो महसुस गर्नुहुन्छ, रक्सी र सुर्तिजन्य शारीरिक समाधान पर्याप्त समाधान जस्तै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यो अस्थायी पुनःप्राप्ति समाप्त भएपछि तनावपूर्ण स्थिति प्राय: रहिरहन्छ।
कसरी सिगरेट वा रक्सी बिना छुट्टी तनाव सामना गर्न
छुट्टी तनाब व्यवस्थापन यसको मतलब धुम्रपान, मदिरापान, वा अन्य अस्वास्थ्यकर बानीहरूमा संलग्न हुनु होइन। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईले धुम्रपान वा मद्यपान बिना कुनै किसिमको छुट्टीको तनाव कम गर्न सक्नुहुन्छ।
आठ घण्टा निद्रा लग गर्नुहोस्। पर्याप्त आराम पाउँदा सबै थोरै सजिलो हुन्छ - पदार्थको प्रयोगको पुललाई प्रतिरोध गर्ने सहित। तनावपूर्ण स्थितिमा राम्रोसँग विश्राम गरेर प्रवेश गर्ने कडा भावनाहरू प्रबन्ध गर्न र नियन्त्रण बाहिर सर्पिलिंग बीचको भिन्नता बनाउन सक्छ।
शारीरिक गतिविधि को लागी समय बनाउनुहोस्। मस्तिष्क रसायन परिवर्तन गर्न र दिमागले थप डोपामाइन उत्पादन गर्न व्यायाम धेरै राम्रो छ। यो पक्कै पनि सहयोगी छ, डा। यसले भावना-राम्रो एन्डोरफिनहरू पनि जारी गर्दछ जुन अप्रिय भावनाहरूलाई रोक्न सक्छ।
तपाईंको आशीर्वाद गणना गर्नुहोस्। तपाईंको जीवनका सबै राम्रा चीजहरूमा चिन्तन गर्नाले - विशेष गरी अन्त्य गरे पछि उत्पन्न भएका-ले तपाईंलाई तनावपूर्ण क्षणबाट तान्न मद्दत गर्दछ।
केही गहिरो सास लिनुहोस्। शान्त कोठामा जानुहोस्, र तपाईंको पीडा स्वीकार गर्न केही मिनेटहरू लिनुहोस्। त्यसो भए, छोटो ध्यान व्यायाम प्रयास गर्नुहोस्। मानसिक सास फेर्न तनाव कम गर्न सक्छ, र सिगरेट वा रक्सी जोगिन तपाईंको प्रतिबद्धता अझ सुदृढ बनाउँछ।
भर्चुअल जानुहोस्। २०२० मा प्रियजनहरूलाई हेर्न असमर्थ छ। डिजिटल प्लेटफर्मले स्टक गरिएको बारको प्रलोभन (वा पारिवारिक धुँवा बिच्छेद) बिना जडान प्रस्ताव गर्न सक्छ। डा। रोजेंथल भन्छन्, म लामो ज़ूम कल सिफारिश गर्दछु। जुम मानिससँग सम्पर्क गर्ने धेरै उपयोगी तरीका हो जब तिनीहरू शारीरिक रूपमा उपस्थित हुन सक्दैनन्। यो एक फोन कल भन्दा धेरै राम्रो छ।
होईन भनेर योजना बनाउनुहोस्। यो कि तपाइँको हात एक गैर मादक मकटेलमा व्यस्त राख्नु भएको छ, वा केवल तपाइँले के भनिरहनु भएको अभ्यास गर्दा कसैले तपाइँलाई सिगका लागि बाहिर जान भनियो, तपाइँले कसरी अग्रिम सामना गर्ने भनेर जान्नुको कारण यसले तपाइँको अनुहारमा टाँसिनुहुन्छ। लक्ष्यहरू।
समर्थन प्राप्त गर्नुहोस्। छुट्टीको समयमा खराब बानीबाट बच्नको लागि यो तपाईंले चलाउन सक्ने स्मार्ट निर्णय हो। यदि कोही रक्सी वा सुर्तीजन्यलाई व्यवहार गर्ने तरीकाको रूपमा प्रयोग गर्दैछन भने उनीहरू केही सहयोग बिना रोक्ने छैनन्, डा। रोसेन्टल वर्णन गर्दछन्। यो सजिलो हुन सक्छ एक sober दोस्त ल्याउन को लागी तपाइँको संकल्प बढावा दिन को लागी। अधिक गम्भीर दुर्व्यसनहरूको लागि यसको अर्थ अल्कोहोलिक अज्ञात (AA) मा सामेल हुन वा मद्दतको लागि धूम्रपान निषेध कार्यक्रममा भाग लिन र तपाईंलाई उत्तरदायी बनाउन सक्ने अरूलाई खोज्नको लागि हुन सक्छ।
नयाँ परम्परा सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईंको सामान्य पारिवारिक जमघटले तपाईंलाई पुरानो बानीहरू जस्तै धुम्रपान वा मदिरामा पुर्‍याउँछ भने, केहि फरक प्रयास गर्ने विचार गर्नुहोस्। साथीहरूसँग योजना बनाउनुहोस्, वा यसको सट्टा छुट्टी लिनुहोस्।
पर्चेमा स्टक अप गर्नुहोस्। यदि तपाइँले कुनै लिनुहुन्छ औषधि यसले तपाईंलाई ट्र्याकमा राख्दछ (जस्तै एन्टिडप्रेससन्ट वा एन्टि-क्रेभिंग ड्रग्स), छुट्टिहरू भन्दा अघि तयार हुन नबिर्सनुहोस् - विशेष गरी यदि तपाईं शहरबाट टाढा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने।
एक पेशेवर भर्ना गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई तपाईंको पिउने वा धुम्रपान गर्ने बानीहरू समस्याग्रस्त जस्तो लाग्छ भने, एक नयाँ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरको साथ पानीको परीक्षण गर्न यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् जसले व्यसनको विशेषज्ञता छ। भर्चुअल अपोइन्टमेन्टहरूले यस वर्ष चिकित्सीय हेरचाहलाई अझ बढी पहुँचयोग्य बनाएको छ। तपाईंको अवस्थामा निर्भर गर्दै, तपाईंको चिकित्सक सिफारिस गर्न सक्दछ धूम्रपान बन्द ड्रग्स जस्तै Chantix , OTC निकोटीन प्रतिस्थापन थेरेपी (NRT) मनपर्दछ निकोरेट , र प्रिस्क्रिप्शन NRTs जस्तै निकोट्रोल । स्थापित मदिरा सेवनको साथ व्यक्तिहरु को लागी, औषधि naltrexone पिउन इच्छा कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
यदि तपाईं एक लत संग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, छोड्ने योजना विकसित गर्न आफ्नो डाक्टर संग काम गर्नुहोस्। तपाईबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ रक्सी बेनामी र बाट अगाडीको योजना बनाउन संसाधनहरू खोज्नुहोस् SAMHSA ।
एक uti बाट छुटकारा पाउने तरिका
यदि छुट्टिहरू तपाईलाई गाह्रो छैन भने, मौसममा प्रियजनहरूलाई सम्पर्क गर्न विचार गर्नुहोस्। खुला र अरुको लागि झुकाउनका लागि उपलब्ध हुनु पक्कै पनि संघर्ष गरिरहेको संसारमा फरक पार्छ। लत बिना नै दु: ख, चिन्ता र एकाकीपनका समस्याहरू र अन्य सles्घर्षहरूको बीचमा छुट्टिको तनावले आफैंलाई भारी बोझ बनाउन सक्छ।
१० सर्वश्रेष्ठ गतिशीलता स्कूटरहरु: जो तपाइँको लागी सही छ?
शीर्ष5सर्वश्रेष्ठ ढोका फ्रेम बार्स पुल
levitra खुराक कहिले सम्म यो अन्तिम हुन्छ
जनसंख्या को कति प्रतिशत autism छ
त्यहाँ खमीर संक्रमण को लागी एक घर उपचार छ
के एक मूत्र संक्रमण को लागी राम्रो छ
कानको दुखाइ को लागी सबै भन्दा राम्रो के हो